လိပ်လိုနှေးတဲ့ GSM Internet Connection ကနေ ဒုံးပျံလိုမြန်တဲ့ WCDMA Internet Connection ပြောင်းပေးမယ့် Android ဖုန်း Software ပါ။ | မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
» Speed up Internet
» လိပ်လိုနှေးတဲ့ GSM Internet Connection ကနေ ဒုံးပျံလိုမြန်တဲ့ WCDMA Internet Connection ပြောင်းပေးမယ့် Android ဖုန်း Software ပါ။
ပြီးတာနဲ့ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ... H ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရသလို..အင်တာနက်လိုင်းလဲ အင်မတန်ကောင်းလာတာကို လက်တွေ့သိရမှာပါ..ကျနော်စမ်းသပ်ချက်အရတော့ ကွန်ပျူတာ သုံးလုံးအထိ ကောင်းကောင်းခွဲသုံးလို့ရခဲ့သလို
သုံးနေရင်းတစ်ပြိုင်နက်တည်း Kaspersky Antivirus Update ကိုလည်း Download ချလို့ရအောင် မြန်ဆန်ခဲပါတယ်.. အရင် GSM Connection နဲ့ဆိုရင် Update လုပ်ဖို့ဆိုတာ အသာထား..ကွန်ပျူတာနဲ့အင်တာနက်ချိတ်လိုက်ပီဆိုရင်ကို လိမ်ဖယ်လိမ်ဖယ်နဲ့တက်နေရတာပါ...အရင်ကတော့
GSM ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်မိနစ် ၂ ကျပ်နှုန်းနဲ့ဖြတ်တာပါ..WCDMA Mode ပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက် တစ်မိနစ် ၄ ကျပ်နှုန်းနဲ့ဖြတ်တော့တောမဟုတ်ပါဘူး..
ကဲ...အားလုံးဘဲ GSM အင်တာနက်အသုံးပြုပြီး လိုင်းမကောင်းခြင်းဘေးမှ ကင်းဝေးကြပါစေဗျာ..အဆင်ပြေရင် Comment လေးတွေမြင်ချင်ပါတယ်။
Download From Dev-Host Soldifiles or Tusfiles or SendSpace
လိပ်လိုနှေးတဲ့ Internet စနစ်ကနေ ဒုံးပျံလိုမြန်တဲ့ Internet ဖြစ်အောင် Software မလိုဘဲ လုပ်ရနည်းကို ဒီမှာ နှိပ်၍ကြည့်ပါ.
မှတ်ချက်။ ဒီ App ဟာ 2.3.6 တွေမှာ ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်ပြီး 4.0 နဲ့အထက်တွေမှာတော့ တစ်ချို့သာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်..
: လိပ်လိုနှေးတဲ့ GSM Internet Connection ကနေ ဒုံးပျံလိုမြန်တဲ့ WCDMA Internet Connection ပြောင်းပေးမယ့် Android ဖုန်း Software ပါ။
: Android ဖုန်းပေါ်မှာ GSM Internet သုံးတဲ့သူတွေ သိကြတဲ့အတိုင်းပါဘဲ..Connection က E ပြောင်းလိုက်၊ 3G ပြောင်းလိုက် H ပြောင်းသွားလိုက်နဲ့ C...
Ok I will test it now.Oh! I can't sownload it.Help...........
soft ware ရဲ့ နာမည် အတိအကျလေး ထည့်ရေးပေးပါလား။ လင့်သေ တဲ့ အခါ ဂူဂဲ ကနေဒေါင်းလို့ ရတာပေါ့။ အခု ပေးထားတဲ့ လင့်2ခုစလုံး ဒေါင်းမရပါ။thank you.
Huawei u8825d ပါ WCDMA only လုပ်လိုက်တာ လိုင်းပျောက်သွားတယ်ဗျ ...ဘာလို့လဲ..ကျွန်တော်ဒေါင်းတဲ့ဟာက အစ်ကို screen shotပုံနဲ့မတူဘူး...ဗားရှင်းကွာလို့များလားဗျာ ပြောပြပါဦးခင်ဗျ
ဒေါင်းလို့ မရပါ ကျေးဇူးပြုပြီး apk ကိုemokaunglay634@ကိုပို့ ပေးပါလား
Hi Bro....., I can't download that apk.Pls help me our bro...thank huge.
Hi Ko Zaw Linn Htet.. All links are still updated.. Try again to download and read carefully how to download in ဒေါင်းလော့လုပ်နည်းများ label. Be OK !
Download ကမရပါ mediafire မှတင်ပေးပါလားဗျာ
Huawei u8825d ပါ WCDMA only လုပ်လိုက်တာ လိုင်းပျောက်သွားတယ်ဗျ ...ဘာလို့လဲ.ဆက်ကူညီပါဦးအကိုရေ Reply
အကိုရေဒေါင်းလို့တော့ရတယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့ဖုန်းမှာပြောင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။။။ကျွန်တော့ဖုန်းက HUAWEI U8661 ဖြစ်ပါတယ် Card2မှာထည့်ထားတာပါ Card 1 ကပျက်နေလားမသိဘူးသုံးလို့မရပါ။။။။။နည်းလမ်းလေးသိရင်ပြောပြပေးပါဗျာ........
De zin ခင်ဗျာ.. လိုင်းပျောက်သွားတာက 3G လိုင်းမမိတဲ့နေရာမှာဖြစ်နေလို့ပါ.. ဆော့ဖ်ဝဲမလိုဘဲ မြှင့်တဲ့နည်းရယ်.. လိုင်းမမိတော့ရင် ပြန်လုပ်ရမယ့်နည်းရယ်ကို http://komaungpauk.blogspot.com/2013/03/internet-internet-software.html မှာ တင်ထားပါတယ်.. Yar Maboylay ခင်ဗျာ.. Sim Card ထည့်ထားတဲ့ Card ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်တော်ပြောတဲ့လင့်မှာ ရေးထားပါတယ်.. ကျွန်တော်လည်း 8661 သုံးတာပါ.. ကျွန်တော်လုပ်တာ အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျ.. 2G ပဲမိတဲ့နေရာမှာတော့ 3G ပြောင်းရင် လိုင်းပါပျောက်သွားပါတယ်.. 3G မိတဲ့နေရာမှာသာ လုပ်လို့ရနိုင်မှာပါ..
DGS phone status ဆိုတဲ့software ကိုပြောင်းသုံးပါ။ galaxy grand ဆိုရင်သူနဲ့မှရတယ်။
တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုတင်ပေးသူများ မျှဝေပေးသူများအားလုံးကို အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျမ်းမာလို့ အသက်ရာကျော်ရှည်စွာနဲ့ ပညာတွေကိုအမြဲတမ်းမျှဝေပေးနိုင်ပါစေလို့အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးနေမှာပါ..............
Win pye phyo
phone apphttps://docs.google.com/file/d/0BwFJIATZHjqnc25idnlDNFQwdTg/editcom.sundaymgmg.zpzafdrrzkkequijea.apk - Google Drivedocs.google.comLike · · Unfollow Post · Share · Yesterday at 2:45pm
လင့်တွေက အကုန်သေနေတယ်ဗျာ၊ အပူကပ်ပါရစေပြန်တင်ပေးမယ်ဆို တအားကောင်းမှာပါ
ကို plot plut ရေ Mediafire ကလွဲရင် ကျန်တာ လင့်အကုန်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ.. 4.5.2013 ရက်နေ့ ညနေ3နာရီအတိ မှာ ပြန်စစ်ထားတာပါ....
Nay Lin Lin
မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ.. ဒါလေးဖတ်ပေးပါ.. Software မလိုဘဲလုပ်နည်းကို http://komaungpauk.blogspot.com/2013/03/internet-internet-software.html မှာတင်ပေးထားပါတယ်.. Software တွေက Mediafire ကလွဲရင် ကျန်တဲ့လင့် (၃)ခုလုံးမှာ ရှိသေးတယ်ခင်ဗျ.. ကျွန်တော် 6.5.2013 ရက်နေ့ ညနေ3း 20 မှာ ပြန်စစ်ပြီးသားပါ.. ဆိုဒ်ကလည်း 5.6 KB လေးပဲရှိတယ်ခင်ဗျ.. တကယ်လို့များ မိတ်ဆွေတို့ ဘယ်လိုမှ ဒေါင်းမရဘူး.. Software မလိုဘဲလည်း လုပ်မရဘူးဆိုရင် အီးမေးထားခဲ့ပေးပါ.. ကျွန်တော် အီးမေးကနေ ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်...အဆင်ပြေကြပါစေ....ခင်မင်လျက်မောင်ပေါက်
ကျွန်တော့ဖုန်းက c8825d ပါ... ဒီ software မသုံးပဲ phone info ကို code နံပါတ်လေးရိုက်ထည့်ပြီး ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတယောက်ဖွင့်တာတွေ့ဖူးလို့ပါ... ဖြစ်နိုင်ရင် အဲ့ဒီ့ code လေးပြောပြလို့ရမလားဗျာ...ခင်မင်လျှက်ပါ..software ကတော့ဒေါင်းလို့မရပါ.. google မှာလိုက်ရှာပြီးဒေါင်းမှရသွားတယ်information အတွက်ကျေးဇူးပါ
han ရေ.. Code က *#*#4636#*#* ဖြစ်ပါတယ်... အဲဒီအကြောင်းအပြည့်အစုံကို http://komaungpauk.blogspot.com/2013/03/internet-internet-software.html မှာ တင်ထားပါတယ်.. ဖတ်ကြည့်ပါ... အဆင်ပြေမှာပါ...ခင်မင်လျက်မောင်ပေါက်
plz ko pauk..sent this software to my email yeuthar55555@gmail.com..thankyou..
အစ်ကိုရေ အပူကပ် မဲ့သူတစ်ယောက် တိုးလာပြီ ပြသနာက y210-2010v100R001C92B828 ပါ အင်တာနက် ဖွင့်မရဘူး လုပ်နည်းအတိုင်း လုပ်ပေမယ့် မရဘူးဖြစ်နေတယ် အရင်ကU8661 ကိုသုံးတာပါ ဘာလိုနေလည်း ပြောပေးပါလား
ဟုတ်ကဲ့အစ်ကို ကျွန်တော်ဖုန်းက galaxy y ပါဘယ်လိုမှ ဒေါင်းလို့ မရပါကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော်ကို ကူညီပေးပါအီမေးလိပ်စာကsiminthu25@gmail.com
ရတော့ရတယ် အကိုပြောသလို WCDMA Only လို့ လဲပြောင်းတာပဲ speed ကတော့ထူးခြားမလာဘူး အရင်ကလဲ 30 kb/s ၀န်းကျင်ကျတာပဲ အခုပြောင်းလိုက်တော့လဲ အဲလောက်ပဲကျတယ် ဘာများမှားနေလို့ ပါလိမ့်လုပ်တာ
WCDMA Only lo ma paw bu balo load ya maly
ဒေါင်းလို့တော့ရတယ် အကိုပြောတဲ့အတိုင်းပြောင်းတယ် ဒါပေမယ့် Gsm က Gsm ပဲ wcdma လဲမပြောင်းဘူး သုံးတဲ့အချိန်ကို တွက်ကြည့်တော့ တစ်မိနစ်ကို ၂ ကျပ်ဘဲ ၄ ကျပ် မပြောင်းဘူး ဘာလို့မရတာလဲ ကျွှန်တော့ဖုန်းကhuewai 8661 ပါ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာပြောပေးပါအုံး ခပ်မြန်မြန်လေး ပြောပါနော်......
wcdma မပြောင်း ဘူး။ software လဲဒေါင်းလို့ရတယ်။ install လဲရတယ်းဒါပေမဲ့ why?
ဒီကောင်ကိုသုံးပြီး ပြောင်းလိုက်လို့ WCDMA ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ.. WCDMA 3G လိုင်းမိတဲ့နေရာတွေမှာ 2G ကနေ 3G လိုင်းကို ဆွဲယူသုံးစွဲတာသာဖြစ်ပါတယ်.. လိုင်းမှာ 2G အစား 3G တက်လာတာကလွဲရင် ကျန်တာ ဘာမှ ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူး.. ဒေါင်းတဲ့အခါ 2G Speed နဲ့ 3G Speed ကွာပါတယ်.. သတိထားရမှာက 2G လိုင်းတစ်ခုပဲ မိတဲ့နေရာမှာ 3G (WCDMA Only ) ပြောင်းလိုက်ရင် ဖုန်းလိုင်းပါပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်... ဒါဆိုရင်တော့ ပြောင်းလို့မရပါ.. နဂိုအတိုင်းပဲ ပြန်ထားရမှာပါ..အဆင်မပြေရင် ပြောပါ.. ဆော့ဝဲ ဒေါင်းမရရင်ပြောပါ ပို့ပေးပါမယ်..
i can't download. plz say me
ကိုပေါက် DGS phone status software ပို့ပေးပါ koshwemm@gmail.comကျေးဇူးတင်ပါတယ်
David Sar Ka BoulHtoo
I can't fine wcdma mode when I pin *#*#6463#*#*GSM/TD-SCDMA AUTOTD-SCDMA ONLYGSM ONLYUNKNOW
အ၇င်ကတောင်..H...ပေါ်ပါတယ်.အခု..wcdma ကိုချိန်းလိုက်တာ..SMS တောင်ပို့လို့မ၇တော့ဘူ.လှိုင်းတော့၇ပါသေးတာယ်..ကူညီပါအုံး.
ဒေါင်းလို့ မရဘူးဗျ စေတနာထားပီး luhnin@gmail.com ကိုပို့ ပေးပါလာဗျ
http://android.downloadatoz.com/apps/com.dailygoodstuff.tool.phonestatus,199762/download.htmlGo to this link, and download the DGS Phone status software.
lilly thane DGS phone statusကိုgoogle playမှာရှာလို့မရဘူးအကို့မှာရှိရင်ပို့ပေးပါ koshwemm@gmail.comကျေးဇူးတင်ပါတယ်
please help me! my ph is c8813c . To fix myanmarsar error. i already down elegence theme. no fix. why ?
Tin Ko သို့https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dailygoodstuff.tool.phonestatusအဲဒီ address အတိုင်း copy and paste သွားလိုက်ရင် ရပါပြီ။ google play က နေပြီးဖုန်းထဲကို တိုက်ရိုက် install လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ Reply
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပိုက်ပိုက် က 4ကျပ်ဲဖတ်တာတော့ မသိပါဘူး
ပိုက်ဆံက နှစ်ကျပ်ပဲဖြတ်ပါတယ်။ Reply
ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ .. တကယ်ပါ
ကျေးဇူးပဲဗျို့ အဆင်ပြေတယ်ဗျို့ ဒါပင်မဲ့3G လိုင်းကတစ်တုံးပဲတက်တယ်ဗျ
Dial Pad ကနေ *#*#4636#*#* ရိုက်ပြီး phone information ကို ရိုက်လိုက်ရုံနဲ့ရပါတယ်။
ဒေါင်းလို့မရဘူးဆရာ ကျွန်တော်ကျေးဇူးပြူပြီ doubleheart375 ကိုပို့ပေးပါလား
‌ဒေါင်း လို့မရဘူး ပို့‌ပေးပါဦး
အထက်က ပုဂ္ဂိုလ်.. လိပ်စာမရှိ၊ နာမည်မသိတော့ ဘယ်ကို ပို့ပေးရမှာလဲ.. ဟင်.!
DGS phone statusကို‌ဒေါင်း လို့မရဘူး ပို့‌ပေးပါဦးmyaccsave@gmail.comကို
( *#*#4636#*#* ) အဲဒါက ဖုန်းအမြင့်တွေမှာ မရပါဘူး။ Galaxy grand မှာသုံးလို့ မရပါဘူး။ DGS phone status ကို သုံးမှရပါတယ်။ အောက်ပါ link မှ down ကြပါ။ http://www54.zippyshare.com/v/56861405/file.html
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. Lilly thane ရေ... Reply
ရ ပြီး lilly thane. ရေ. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မောင်ပေါက်ကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်
I don`t see Myanmar font...how i can do ?Please say me ...
အပေါ်ကပေးထားတဲ့ဆော့ဝဲလ်က ကျွန်တော့်ဖုန်းမှာ run လို့မရဘူးကျွန်တော့်ဖုန်းက GALAXY NOTE2GT N.7100 ပါ
I CAN NOT GET WITH GSM SIM CARD
Huawei Y210 မှာ wcdma လို့ပြောင်းလို့မရပါဘူး။unknow ပဲပြန်ဖြစ်သွားလို့ ဘာကြောင့်လဲပြောပြပါဦး။
အကို ရေ ကူညီပါအုန်း ကျွန်တော် အရင်သုံးတဲ့ Huawei U8661 မှာ အကိုပြောတဲ့ WCDMA Only ကို သုံးလို့ ရပါတယ် အဆင်ပြေါပါတယ် အခု Huawei G510 Model no..T 8951 မှာ အကိုပြောတဲ့ ဆော့ဝဲလ် ၂ ခုလုံးဒေါင်းပြီးပါပြီး ဒါပေမဲ့ 3G preferred , 2G only ,3G only ဆိုတာတွေပဲ တွေ့နေပါတယ် 3G :only ဝင်ပြန်တော့လည်း လိုင်းပျောက်သွားပါတယ် ဒါနဲ့ အရင်ဖုန်း U8661:ကို ပြန်သုံးကြည့်တော့ wcdma only ရပါတယ် အဆင်ပြေ အောင် ကူညီညွှန်ကြားပေးပါအုန်း အကို
WCDMA Only ကိုရွေးတဲ့သဘောက 3G Only ဖြစ်အောင်ရွေးခိုင်းတာပါ.. WCDMA Only မပါတဲ့သူတွေက 3G Only ကိုရွေးပါ.. WCDMA Only နဲ့ 3G Only အတူတူဖြစ်ပါတယ်.. Reply
အကို ရေ အခုလို ပြန်ဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် U 8661:က ရပြီး G510က ဘာလို့မရပါသလဲခင်ဗျာ 3G ကွန်ရက် ရှိတဲ့ နေရာမှာ G510 ဖုန်း က ဘာတွေ လိုအပ်နေလို့ ပါလည်း ခင်ဗျာ Reply
အကိုရေ ကျွန်တော်ကိုကူညီပါဦး...ကျွန်တော်ဖုန်းက imobile i-style 7.3 ပါ ကျွန်တော်rootဖောက်လိုက်တာ မူရင်းပါလာတဲ့ဖုန်းမြန်မာဖောင့်ပျောက်သွားလို့ပါ....ကူညီပါဦး.....
​ကျေးဇူးကိုအကြီးကြီးတင်​တယ်​... ​တော်​​တော်​​လေးလည်းပိုက်​ဆံကုန်​တယ်​... ဘာ​ပဲ​ပြော​ပြော good သွားပီ
အကိုရေ HuaweiG510 မှာမရဘူး ဘယ်လို လုပ်ရမလဲကူညီပါဦးးးးဒေါင်းလို့တော့ရတယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့ဖုန်းမှာပြောင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။
အကိုရေHuaweiG510 မှာမရဘူး ဘယ်လို လုပ်ရမလဲကူညီပါဦးးးးဒေါင်းလို့တော့ရတယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့ဖုန်းမှာပြောင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။
ကျွန်တော့်ဟာတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျ..သို့သော်ကိုကိုပေါက်ရေ 4ကျပ်မဖြတ်ဘဲ2ကျပ်ဘဲဖြတ်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးများမရှိတော့ဘူးလားဗျ...:P ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်တာနက်ရယ် ဖုန်းရယ် message ရယ်ဆိုတော့မခံနိုင်လို့ပါ အကယ်íဖြစ်နိုင်ရင် ကူညီစေချင်တယ် အားလုံးအတွက်ပါ..ကျေးဇူးကဘာပါ
ုhuawei Y320 t00 တွင် set preferred network type မပေါ်ပါ ..အင်တာနက်လိုင်းကမပေါ်ပါ ကြာမှပေါ်ပါတယ် လိုင်းကမကောင်းပါ...wcdma card သုံးထားပါတယ်....ကူညီပေးပါခင်ဗျာ Reply
ဒေါင်းလို့ မရဘူးကျေဇူးပြု၍ redevil.pol@gmail.com ကို apk လေးပို့ ပေးပါလား
ဒေါင်းလို့ မရဘူးအကို။ကျေးဇူးပြုပြီးctzk.com@gmail.comကိုပို့ ပေးပါ။
huawei g610c အလုပ်မလုပ်ဘူးကူညီပါအုံး
ဒေါင်းလို့ မရဘူး ကူညီပါဗျာ ဖုန်းကG606ပါ ပို့လို့ ရရင် ပို့ ပေးပါ အကို gawmason.1357@ ကျေးဇူးပါ အကို
အကို မရလို့ ပါ ကျနော်ကိုကျေးဇူးပြုပြီး ပို့ ပေးပါ ခမျာ
International Snooker 2012 Full (1.01 GB)
Corel AfterShot Pro 1.1.0.30 Full (59.4 MB)
ဖုန်းနဲ့ Computer ကိုချိတ်ပြီး Network သုံးရင်.......
အသံထွက်ပါသော English to Myanmar Dictionary (191 MB...
နှစ်ခုပွားနေတဲ့ ဖိုင်တွေကို ဖျက်ပစ်ဖို့ Duplicate ...
Rar ဖိုင်တွေ Password မေ့ရင် သုံးတဲ့ Rar Password ...
ကီးတွေ ရှာဖို့ MyKeyFinder Plus 2013.1 (2.8MB)
Adobe Premier Pro CS6 Full Crack Only
ဝမ်းတွင် အစာမရှိလျှင် (လ္ဘက်ရည်ကြမ်း) သောက်သင့်မသော...
LogoSmartz Logo Maker 10.0 Full (47 MB)
DRIVERPACK SOLUTION 12.3 R271 (X86X64) (ANY DRIVER...
လိပ်ပြာ Live Wallpaper For Android (Season Zen HD ...
Website နဲ့ Blog တွေကို Offline ကြည့်ဖို့ Website ...
PSD Frame တွေကို Thumbnail နဲ့ကြည့်နိုင်တဲ့ Mystic...
Windows 8 Start Screen တွင် ၀က်ဘ်ဆိုက်များကို ထည့်...
Adobe Illustrator CS6 16.0.2 Portable (122MB)
BitDefender Database Offline Update [24.12.2012]
KASPERSKY 2013 OFFLINE UPDATE KIS/KAV/PURE - [24.1...
ESET NOD32 Smart Security နဲ့ ESET NOD32 Antivirus...
XP အတွက် Chess Games
USB Disk Security 6.2.0.24 Full (4.35MB)
Android မှာ Install လုပ်ပြီးသား App တွေကို Share လ...
DriverPack Solution 12.3 R255 Lite Portable (8MB)
မြန်မာ Offline Map ပါတဲ့ Android App
Recovery img နဲ့ Boot img သွင်းနိုင်မယ့် Android A...
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ခေတ်စားလာမည့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ဟ...
Aurora 3D Text & Logo Maker 12.12.14 Full (43 MB)
Windows တွေရဲ့ Icon, Images , Libraires တွေကို စိတ...
Window 7,8 ကို USB မှတဆင့် Window တင်နိုင်ဖို့
IconLover 5.33 Full (10.5 MB)
Driver Genius 12.0.0.1211 Final Full (20 MB)
Android သုံး Device တွေမှာ Root လုပ်စရာမလိုဘဲ မြန်...
Huawei T-8828 Root လုပ်ဖို့ ....
အခြေခံ အင်္ဂလိပ် သဒ္ဒါ စာအုပ်
VMware Workstation v 9.0.1.894247 Full (402 MB)
Hiren's BootCD 15.2 ISO ( 592 MB)
PowerISO 5.5 Full ( 6.88 MB )
MP3,MP4,iPod,iPhone, All Digital Playerလုပ်ဆောင်မှု...
NETGATE FortKnox Personal Firewall 9.0.195.0 Free ...
Official Firmware ပြန်တင်ရင် Step2မှာ Fail ဖြစ်ြ...
Website/ Blog တွေကို Apk ဖန်တီးခြင်း (နောက်တစ်နည်း...
CyberLink YouPaint 1.5.0.4713 Full (181MB)
မွေးနေ့ ရက်များက ပြောသော လူတယောက်ရဲ့ အမူအကျင့်များ...
Windows 8 တွင် Zawgyi-One Font အသုံးပြုနည်း
TeamViewer သုံးနည်း ကျွန်တော် သိသမျ
Webroot SecureAnywhere 8.0.2.85 +6Month Serial (...
Android အတွက် Maxthon Brower 2.3.1
Deep Freeze6&7Passwords Remover
Word နဲ့Excel များကို သော့ခတ်ထားနည်း
Software မလိုဘဲ ခွေကူးနည်း
windows-7 / vista တို့မှာ safe mode ထဲကို ဝင်ဖို့ ...
Microsoft .Net Frame work 1.1 to 4.5
Windows 8 ISO Highly Compressed Fully Activated ( ...
Facebook အရေးပေါ် သတိပေးကြေညာချက်
BitDefender Database Offline Update [09.12.2012]
Kaspersky 2013 Offline Update File (396.6MB)
Huawei U8836D ကို root လုပ်နည်း
Mobile Counter Pro v2.6 for Android (Full Version)...
window အတုဖန်တီးပြီး အသုံးပြုခြင်း
English ဘာသာကို Android နဲ့လေ့လာဖို့ Fluent Englis...
6.12.2012 နေ့အတွက် Kaspersky Daily Key